Taariikh Nololeedka Cabdulaahi Yusuf – The official Somali Historical
Taariikh Nololeedka Cabdulaahi Yusuf
Waxa aan fursad u helay in aan akhriyo nuqul ka mid ah buugga ay dhowaan soo saartay Shirkadda Scansom, uuna qoray madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Hor & ahaato waxa aan mahad uga jeedinayaa Cabdullaahi in uu maray waddo aanay Soomaalida siyaasiyiinteedu inta badani aanay hore u budlin, oo ah in uu waayihiisii wax ka qoray. Baravo!
Haddaan u galo tan buugga “la qorye maxaa laga dheefay?”. Buuggu waxa uu si baaxad leh laakiin qabyo ah u soo koobayaa waayihii Cabdullaahi & noloshiisii oo midabbo badan leh. Waxa uu nooga bilaabayaa meel uu ku magacaabay Birta Dheer oo degmada Garowe u dhow, uuna qoraagu sheegay in uu ku dhashay sannadkii 1934kii. Waxa uu ku xijinayaa hab nololeedkii miyiga, sidii uu magaalada ku yimi & qorasho lama filaan ah oo uu ciidamada kaga galay magaalada Gaalkacyo.
Waxa uu guud ahaan dulmar & dul-ka-xaadin aan sii qodnayn uu ku sameynayaa waayihii noloshiisa iyo hal’adaygiisii haaminta hoggaamiyanimo oo aan fursado lagu neefsadaayi u kala dhexeyn. Waxa uu na tusinayaa nin karmeednimadiisii, himil ku dheggiisii & sida uu ugu soo halgamay wixii uu nolosha ka rabey, yaraantiisii ilaa imika oo uu cirroole noqday. Jillaafooyin badan oo inta badan in la rumeysto kuu diidaya, laakiin la garan karo in wax badani ka jiraan ayuu horteenna soo dhigayaa.
Ammaanta & anaa iridu waa bud-dhiga & ujeedada buugga oo dhan haddii aan is iraahdo dambi iga raaci maayo ayaan is leeyahay, waase wax laga doodi karo oo akhriste walba iyo aragtidiisa ku xiran. Qofkii aan wax badan ka ogeyn 1940kii ilaa caaradkii 1970taneeyadii, wax badan ayuu buugga ka baran karayaa sida halgankii gobonimo, xorriyad qaadashadii, aasaaskii ciidan Soomaaliyeed oo gaashaan ah, xukuumaddii rayidka ee xorriyadda dabadeed iwm, inkasta oo aan sidii laga filayey aannu qoraagu si qumman ugu dhexgelin sooyaalkaa qotada dheer oo uu dusha uun nooga heehaabiyey.
Marka la soo gaaro kacaankii askarta ee Cabdullaahi xabsiga dhigtay ilaa dawladdii TFG ee uu madaxda ka ahaa, wax weyn oo aan cabasho, tallooyin qumman oo uu mar walba garwadeen ka yahay aanse la qaadan sida uu noo sheegayo qoraagu iyo hagardaamooyin ay wax ka jiri karaan laakiin aad is leedahay armaa la buunbuuniyey mooyaane wax kale oo badan laga faa’iidi maayo, waana halka uu Cabdullaahi difaaca adag oo noloshiisa ku saabsan badideeda uu dhufeyska adag uga qodanayo. Tusaale, waxa uu Cabdullaahi noo sheegay in uu Maxamed Siyaad (AHUN), uu kala tashaday inqilaabka uu maagan yahay, waxase la is weyddiin karaa haddii uu hore u ogaa in Siyaad uu yahay nin aan beer reebayn haddii uu majaraha dalka qabto, muxuu madaxdiisii ugu sheegi waayey si looga hortago!
Dhanka sooyaal ka sheekeynta, Cabdullaahi waxa uu na leeyahay goor iyo ayaanba talooyinkaygu waxa ay ahaayeen biyo kama dhibcaan dhankii la doonaba ha laga eegee, oo haddii la qaadan lahaa waa lagu naajixi lahaa (Allahu Aclam). Dhimashadii Illaahay ha u naxariistee Cabdirashiid Cali Sharmaarke wuu u hollanayaa in uu wax nooga bidhaansho, waase hungo oo wax aan sheekada suuqa taal ahayn wax ka badan naga bari uu maayo. Dilkii Kamaludiinkii (AHUN) reer Masar waa sidoo kale, inqilaabkii Cirro waa sidaa iyo si la mid ah, oo kolka uu meel dhexe marayo isaga oo weliba noo sheegay in uu diyaarintiisa arbe u ahaa, ayna ugu talogaleen in uu dhaco April 12, 1978, maalinka loo asteeyey in loo dabbaaldego aasaaska ciidanka, ayuu haddana noo sheegayaa in Cirro hawshii qabtay April 9, 1978, arrimo isbeddeley awgood, halkaa ayuuna uga harayaa, oo wax dambe kama uu oranayo oo iyana waa qabyo.
SSDF talooyinkiisa oo lagu guuleysan lahaa mooyaane wax kale oo sii qodan noogama uu sheegin. Xilkiisii Puntland gaar ahaan kii uu madaxda ka ahaa iyana waa gol maran. Waxa keliya oo intii uu Puntland uu joogey ee uu madaxda ka ahaa laga fahmi karayaa qormadiisa in uu aad uga cabtay Islaan Maxamed, oo uu noo sheegayo in uu isagu ahaa kii daba maroojiyey ee xaska u galay sidii maskii oo kale, taas oo su’aal weyni ka iman karto, laguna doodi karo in uu Cabdullaahi aannu abaalkeedii gudin…..xaq uma lihi in aan hawshaa ka sii sheekeeyo oo buug-daalaca ayaa i xiraya, oo in aan xayndaabka dhaafo aan ii oggolaanayn.
Xilkii Madaxweyninimo ee TFG in uu ku guuldarreystay si cad uma sheegin, waxaase laga garan karayaa qormadiisa in aanay wax badani uga hagaagin oo iyana hagardaamooyin sokeeye & kuwo shisheeyaba ay sutida u qabteen. Cabdullaahi buugga hal sadar oo ka mid ah noogu sheegi maayo wax laga baran karo guuldarrooyinka iyo sida looga hortegi karo. Marna noo sheegi maayo khalad uu galay ama wax uu si u arkay waa imikase uu si ka duwan u arko oo uu nooga digi kari lahaa. Malaha sifadaas waxa uu la wadaagaa haldoorka kale ee Soomaaliyeed, oo aan weli looga baran in ay khaladaadkooda haba yaraatee ay wax ka qirtaan, si ay jiilasha dambe cashar ugu noqoto!
Isku soo xoori oo qofkii wax ka og taariikhda Soomaalida & sooyaal nololeedka Cabdullaahi buugga wax way ka faa’iidayaan, laakiin wax badan ma aha, qofkiise intaa oo dhan ka maran waxa ay u noqonaysaa fursad qaali ah oo badweyn dhex geyn doonta, haddii uu akhriyo.
Cilladaha Farsamo ee Xaga Daabacaadda
Buuggu uma eka mid la soo tifaftiray. Wuu isku dhex daadsan yahay oo waxa aad arkaysaa meelo badan oo kala horreeya oo ay ahayd in inta dib loo eego sida ay isku leeyihiin la iskugu xijiyo. Waxa kaa hor imanayo saddarro isku mid ah oo si hawtal hamagnimo ah baalal badan ugu yaal, oo aad garanayso in aan laga ilduufin ee fudayd dartii looga tegey. Taswiirta dusha ku dheggani waa Allow iga gaarsii & wax kama jiraan kumana ayan habboonayn in ay sida ay u muuqato ahaato, oo taasi waa ay bilic tirtay buugga.
Marka dhan walba laga eego waxa kuu soo baxaysa in buugga aan loo daabicin sidii uu mudnaa ee fudayd, dulqaad la’aan iyo malaha ka gaarsii lacagi ha ka soo maaxdee darteed uun loo daabacay, maaddaama loo xiise qabey buug noociisa oo kale ah, qoraagana aad looga sugayey bal waayo aragnimadiisa gaamurtey in wax laga kororsado.
Hadal & dhammaantii waxa aan ku talin lahaa in qofkii fursad u heli karaa uu akhriyo buugga si uu wax uun uga faa’iido ama uu ugu yaraan waxa aan dhaliil & ammaan ku sheegay uu uga bogto.
Axmed Faarax Gooje,
Previous: Asli Hassan Abade
Next: Burcad badeed maraakiib qafaashay